तस्वीरमा हेर्नुहोस् अन्जु पन्तकी सुन्दरी छोरी परितोसिकालाई ! (फोटो फिचर) – eSidhakura
मुख्य पृष्ठफोटो फिचरतस्वीरमा हेर्नुहोस् अन्जु पन्तकी सुन्दरी छोरी परितोसिकालाई ! (फोटो फिचर)
तस्वीरमा हेर्नुहोस् अन्जु पन्तकी सुन्दरी छोरी परितोसिकालाई ! (फोटो फिचर)
नेपालको चर्चित गायिका एवं सुमधुर स्वरको धनी अन्जु पन्तको सुन्दरताको समाचारहरू बारम्बार आउने गरेको छ । नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा हिट गीत दिन सफल उनै पन्तको छोरी भने मिडियामा खासै देखिन्नन् । मनोज शिवाकोटिसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी अन्जुको परितोसिका एक मात्र छोरी हुन् ।
शिवाकोटिसँग डिभोर्स भएको लामो समयपछि गायिका अन्जु पन्तले दोस्रो विवाह गरिसकेकी छिन् । उमेर सानै भए पनि परितोसिका शारीरिक बनावटमा आमा बराबर छिन् । एक अर्का कपडा समेत साटेर लगाउन थालेका भन्दै केही समय अगाडी समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका थिए ।
गायिका अन्जु पन्तकी छोरी परितोसिका पन्तले म्युजिक भिडियोमा डेब्यू गरेकी छिन्। अन्जुकै स्वर तथा सङ्गीतमा रहेको गीत ‘धेरै माया नदेऊ’ को म्युजिक भिडियोमा उनले अभिनय गरेकी हुन्। उनको साथमा कुनसाङ बोमजमको पनि अभिनय छ।
गीतको भिडियोको निर्देशन निकेश खड्काले गरेका छन्। म्युजिक भिडियोमा काम गर्नु अगाडि परितोसिकाले कलाकार भोला सापकोटासँग दुई साता अभिनयको प्रशिक्षण लिएकी थिइन्।
नायिका स्वेता खड्का ‘प्रवल जनसेवा चतुर्थ श्रेणी’ पदकबाट सम्मानित, लेखिन यस्तो स्टाटस –
अभिनेत्री रञ्जना शर्माले अमेरिकामा गरिन् विहे
२८ लागेकी वर्षाको यस्तो रह्यो जन्मदिन, तस्विरहरु
उमेरसँगै झन् ब’ढ्दै करिश्माको सुन्दरता, हेर्नुहोस् यस्ता सुन्दर तस्बीर !
दिपिका देखा परिन् अहिले सम्मकै हट अवतारमा, हेराैँ उनका ९ तस्विर